DHEGEYSO-Warbixin ganacsiga sharaabka qabow Boosaaso iyo xilliga xagaaga. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Warbixin ganacsiga sharaabka qabow Boosaaso iyo xilliga xagaaga.
Luulyo 20, 2016 4:26 b 0
Boosaaso, July 20 2016--Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waa mid kamid ah magaalooyinka ugu kulul geeska Africa waxaana xilligaan oo kale dadku ay u baahan yihiin qabow iyadoona ay jiraan dad ka ganacsada sharaabka qabow ee lagu iibiyo wadooyinka magaaladaasi.
Maxamed Cabdirisaaq Fantastic oo Daljir uga warama intabadan arrimaha bulshada ayaa warbixinta hoose ka diyaariyey suuqyada magaalada Boosaaso.
DHEGEYSO-Dibad baxyo kadhan ah Soomaaliland oo kadhacay Dhahar.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Aamin Ladan Axmed.